Mobile House: ဖုန်း 3G အင်တာနက် Speed Hack နည်း
ဖုန်း 3G အင်တာနက် Speed Hack နည်း
အွန်လိုင်း မှာ မွေ ရင်း တွေ့ တာ ပါ ။ လိုင်း ကလဲ လုံးဝ မကောင်း တော့ ဘာ မှ လဲ တင်ပေး လို့ မရ လို့ ရတုန်း လေး မန်ဘာ တွေ ကို အလုပ်ပေး လိုက် အုံး မယ် ။
ကျွှန်တော် လဲ တွေ့ ပြီး ကတည်း က သင်တန်း သင်နေ ရတာ နဲ့ မအား လို့ မစမ်း ရ သေး ဘူး ။ မန်ဘာ တွေ ၀ိုင်း စမ်း ကြည့် ကြ ပေါ့ ။ရရင် ပြန်ရှယ် ပေး ပေါ့ ....
Faster cellular data speed
# Don't remove the user/password lines. They are required to make PPPD authenticate itself with
# the BP when doing Simple IP (SIP). The BP will replace the user/password strings with the correct
Attac hed Thumbnails
Posted by Ye Yint Aung at 11:13 AM
မြန်မာစားသောက်ဆိုင် App - Mmfoodies (Android)
China Android SPD ဖုန်းတွေ အတွက် Multi Tools